Jôahaza (mpanjakan' i Jodà) - Wikipedia
Jôahaza (mpanjakan' i Jodà)
I Jôahaza na Jôakaza dia mpanjakan' i Jodà nandimy an' i Jôsia (na Jôsiasa) rainy tamin' ny taona 609 tal J.K. tamin' ny faha-23 taonany. Telo volana monja no nanjakany. Niara-belona taminy ny mpaminany Jeremia izy.
Ny Tanakh (Baiboly hebreo) dia miantso azy hoe יְהוֹאָחָז / Yehoakhaz. Ny Septoajinta (Baiboly amin' ny teny grika) dia manoratra hoe Ιωαχαζ / Iôakhaz ary ny Volgata manoratra hoe Ioachaz. Ny Baiboly prôtestanta malagasy no ahitana ny hoe Joahaza fa ny Baiboly katôlika malagasy kosa manoratra hoe Jôakaza.
Tamin' ny nahafatesan' i Jôsia dia ny zanany faralahy, izay atao hoe Salôma ao amin' ny Bokin' i Jeremia (Jer. 22.11), dia nasandratry ny fivoriamben' ny vahoaka ho mpanjaka. Araka ny Boky faharoan' ny Mpanjaka (2Mpanj. 23.32) sy ny Bokin' i Jeremia (Jer. 22.15-16) dia tsy niraharaha ny fanavaozam-pivavahana nataon' i Jôsia rainy izy. Telo volana taorian' ny fanendrana azy dia nosamborin' ny farao Nekao II izy ka nogadrainy. Ny zokiny atao hoe Eliakima, lahimatoan' i Jôsia, no notendrena hisolo azy sady niova anarana hoe Jôiakima na Jôakima (hebreo: Yehôyaqîm) fa izy kosa nataon' i Nekao sesitany tany Egipta (2Mpanj. 23.31-34) ary maty tany (2Mpanj. 23.34).
↑ Kautzsch, E. "Jehoahaz", The New Scaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Vol.IV, Samuel Macauley Jackson (ed.), Baker Book House, Grand Rapids, Michigan (1953)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jôahaza_(mpanjakan%27_i_Jodà)&oldid=1042044"